केकीको ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ कस्तो चल्ला ? « Ramailo छ
केकीको ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ कस्तो चल्ला ?
आठ वर्षको अभिनय अनुभवपछि नायिका केकी अधिकारी निर्मात्री भएकी छन् । केकीले निर्माण गरेको फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ यही शुक्रबार (बैशाख १४ गते) देखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । केकीको ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ कस्तो चल्ला त ?
गीत, प्रोमो र प्रचार हेरेर अनुमान गर्ने हो भने केकी ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ राम्रो चल्नुपर्ने हो । ‘फिल्म रमाईलो बनेको’, केकीले मिडियासँग भन्दै आएकी छिन्, ‘रमाईलो फिल्मलाई दर्शकले रुचाउनु हुन्छ भन्ने आशा छ ।’ हो, केकीले भनेजस्तै हिजोआज रमाईला फिल्महरुको जगजगी छ । शहरमा चलिरहेको ‘शत्रुगते’ ले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।
तर हलमा दर्शक आउन हल्ला पनि उतिकै हुनु पर्ने आवश्यक चलेका फिल्महरुले देखाएका छन् । यो सँगै फिल्म आफैमा राम्रो हुनुपर्नेछ । फिल्म राम्रो हुन सृजनशिल टिम हुन आवश्यक छ । राम्रो टिम छान्न केकी कत्तिको सफल भएकी छिन्, त्यो चाहिं शुक्रबारसम्म पर्खनै पर्छ । केकी र ऋचासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
म्युजिक भिडियो निर्देशक विशाल भण्डारी निर्देशित फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ मा केकीसँगै प्रियंका कार्की, ऋचा शर्मा, बुद्धि तामाङ, विनोद न्यौपाने, रविन्द्र झा, कुशाग्र भट्टराई लगायत कलाकारहरुको अभिनय छ । कोहलपुर एक्सप्रेस को काउ सङ्ग हिट छ ।